सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’ लाई सरसरती नियाल्दा – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’ लाई सरसरती नियाल्दा
२०७० चैत्र २९, शनिबार ०१:३४ गते
‘हामी आफूखुशी कहिल्यै मिल्न नसक्ने
कसैले मिलाई दिनुपर्ने,
कसैले छुट्याई दिनुपर्ने,
एउटा स्ट्राइकरद्वारा सन्चालित
हो, हामी मानिस कम र गोटी बढ्ता हौँ ।’
भूपी शेरचनको ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ को यसै कविताबाट ‘प्रयोगशाला’ को शुभारम्भ गरिएको छ । जसरी यो कविताले एउटा स्पष्ट लय बोकेर बगेको छ, ठीक त्यसरी नै बगेका छन्, ‘प्रयोगशाला’ मा सुधीर शर्माका कलमहरु पनि । समग्रमा यो पुस्तकलाई राजनीतिक ठेली भनौँ या दिल्ली, दरबार र माओवादीबीचको सम्पूर्ण नालीबेली ! जे भने पनि र जसरी बुझे पनि आखिर कल्पनाको छायासम्म नपरेको यो एउटा यथार्थ गैरआख्यान कृति हो ।
फलको पनि बोक्रा र गुदीबीच गहिरो सम्बन्ध हुनु जरूरी ठान्छु म, उसैगरी कृतिको नाम र भित्र कुँदिएका अक्षरहरुले बोकेको आशयमा पनि मिजासिलो साइनो हुनुपर्छ । अन्यथा, नाम र अक्षरहरुले छुट्टाछुट्टै माने बोकेर हिँडे भने घर खान नसकेर माइतीमा बसेकी छोरीको कहानीजस्तो फितलो र बेस्वादको हुन्छ, पुस्तक । तर ‘प्रयोगशाला’ त निकै स्वादिलो लाग्यो मलाई, मह काट्नेले चाट्ने हातजस्तो । आवरणमा लेखिएअनुसार नै सङ्क्रमणमा दिल्ली, दरबार र माओवादीबीचको कुराकानीबाट कहीँ, कतै तितरबितर भएको छैन यो आख्यान ।
प्रत्येक घटनाक्रमलाई भिन्नाभिन्नै शीर्षकमा छुट्याएर लेखिएको छ, जसले गर्दा कुन समयमा के भयो ? भनेर बुझ्न अझ सजिलो छ, हामीलाई । माओवादीको जनयुद्धले नेपालीलाई दिएको सास्ती र ज्यादतीका घटनाहरु खासै उल्लेख नगरिएता पनि उक्त युद्धकालमा भएका मुख्य–मुख्य राजनीतिक घटनाहरुलाई नछुटाइकन समावेश गरिएको छ, क्रमैसँग । त्यही बीचमा समावेश गरिएको छ, राजदरबार हत्याकाण्डको छोटो अंश पनि ।
शर्मा लेख्छन्– ‘प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ रानाभाट रहेको उक्त छानबिन समितिले दीपेन्द्रलाई हत्याराको आरोप लगायो, तर त्यही सेरोफेरोमा रहेका कयौँ प्रश्नहरुको उत्तर दिन नसकेर नाजवाफ भयो समिति । अझ मृतकहरुको ‘पोस्टमार्टम’ नगरिनुले पनि शंकामाथि शंका थप्ने काम ग¥यो त्यतिबेला, तर बिस्तारै सेलाउँदै गयो सबुत पत्ता लगाउने प्रकृया पनि ।’ साँच्चै नै यो हत्याकाण्ड रहस्यमय बन्यो र रहस्यमा रहँदारहँदै रहस्यको बीचबाटै रहस्यमय तरिकाले नै सेलायो ।
हुन त, माओवादीले सर्त मुताबिक नै जनयुद्धको थालनी गरेको थियो, तर पढ्दै जाँदा यस्तो लाग्यो, जनयुद्धको पक्षमा स्वयम् माओवादी नै थिएन । उनीहरुले केवल आफ्नो माग परिपूर्तिका लागि धम्की दिएका थिए । आखिरमा माग पूरा नभएपछि धम्कीलाई कार्यान्वयन गर्नु रहर होइन बाध्यता आइप¥र्यो, जुन टार्न खोजेर पनि टार्न नसकिने थियो । यदि उनीहरु जनयुद्धकै पक्षमा थिए भने निरन्तर रुपमा वार्ताको लागि पहल किन गर्थे ? युद्धबाट होइन, वार्ताबाट मिलौँ भनेर किन भन्थे उनिहरु ? असल योद्धाहरु त जबसम्म जित सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म निरन्तर लडिरहन्छन् । वार्ताबाट होइन, उनीहरु युद्धबाट नै जित हासिल गर्न चाहन्छन् । जसरी नेपोलियन बोनापार्टले जिते, हिगो चावेज (भेनेजुयलाका राष्ट्रपति) ले जिते, माओत्सेतुङले जिते र जित्यो हिटलरले पनि ।
एउटै कोखबाट जन्मिएका दाजुभाइबीचमा त मनमुटाव हुन्छ भने राजनीतिक विचारबाट एक भएका नेताद्वयहरुबीचको तालमेल बेलाबखत बिग्रनु खासै ठूलो र नौलो कुरा होइन । त्यस्ता खिचातानीहरु माओवादीका बीचमा पनि कयौँ आएको देखिन्छ । दुष्परिणाम ! पार्र्टी नै दुई चिरा भएको सबुत हाम्रो आँखाअगाडि नै छर्लंग छ । सायद, त्यस्ता बेमेलहरु राजनीतिक आचरण नै हो कि ?
जसोतसो भए पनि जनयुद्धलाई अगाडि बढाइरहँदा यदि नेताद्वयहरु स्वयम् आजित नभएको भए एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँग हिसिला यमीले ‘यिनीहरुको जनयुद्ध कहीँ पार लाग्ने हैन, हामीलाई सिध्याउने भए, बचाउनुहोस्’ भनेर याचना गर्दैन थिइन् होला । यही एक वाक्यबाट नै पुष्टि हुन्छ कि उनीहरु युद्धदेखि कति आत्तिइसकेका थिए भनेर ।
सायद, राजदरबार हत्याकाण्ड नभैदिएको भए, २०६१ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र राजाले कु नगरेको भए र भारतले नेपालमाथि चालबाजी खेल नखेलेको भए शान्ति सम्झौता पहिले नै हुन सक्थ्यो, अनि न त माओवादीहरु थप आक्रामक हुनेथिए, न त नेपाली जनताले डर, त्रास, भय र अनेकौँ ज्यादतीका बीच दिन गुजार्नुपथ्र्यो । जे होस्, ढिलै गरेर भए पनि २०६३ मङ्सिर ३ को विस्तृत शान्ति सम्झौताले नेपाललाई नयाँ गोरेटोमा हिँडाउने प्रयत्न ग¥यो । शान्ति सम्झौता भएपश्चात्को २०६२ र ०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र नेपाली दुवैका लागि एउटा साहसिक कदम हो । तर, नेपाली नेताहरुमा झन्झन् बढ्दै गएको परनिर्भरताले गर्दा सोचेअनुरुप सफलता हासिल गर्न सकेन । नेपाल नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनको डाडु–पन्यूँ नै भारतीय निकायलाई सुम्पनु सबैभन्दा ठूलो भूल भयो र विडम्बना पनि ।
आफूलाई राष्ट्रवादी नेता भन्न रूचाउने हाम्रा देशका नेताहरु केवल नामका मात्र नेता रहेछन् । राष्ट्रप्रेमी नेतामा हुनुपर्ने गुणहरु कसैमा पनि रहेनछ । भूपी शेरचनले कवितामा भनेझैँ हाम्रा नेताहरु भारतका गोटी हुन्, भारतले जता चलायो उतै चल्ने र जसरी चलायो उसरी चल्ने । सायद, त्यसो नभएको भए संविधान पहिले नै लेखिन्थ्यो कि ? भनेर आशंका गर्ने ठाउँ दिएका छन् नेताहरुले । संविधान लेखनका लागि चुनिएका ६०१ सभासद्हरुलाई खुवाइएको लगभग ९ करोडबराबरको भत्ता रकम बालुवामा पानी खन्याएसरह भयो । परिणामतः न त्यो काम लाग्यो, न त काम लाग्ने छ कुनै दिन ।
उसो त, माओवादीले जनयुद्ध र संविधानसभाको बाटोबाट प्राप्त गरेको देखिने उपलब्धि भनेको गणतन्त्र थियो । तर, के त्यसका लागि दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व आवश्यक थियो ? निःशस्त्र जनसंघर्षका माध्यमबाट सम्भव थिएन ? यस्ता प्रश्नहरु किन उठिरहेछन् भने गणतन्त्रको प्राप्ति पनि माओवादीको एकल सामथ्र्यबाट सम्भव भएको थिएन । त्यसमा कांग्रेस, एमालेजस्ता संसदीय अभ्यासमा रहेका दल र भारतसमेतको सहकार्य जोडिएको थियो भने दशकभन्दा बढी समयसम्म निर्दोष नेपालीले बगाएको रगतको खोलो केका लागि ? के पाउँछौँ भनेर आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर युद्धमा होमिएका थिए नेपालीहरु ? कयौँ नेपाली चेलीहरुको सिउँदो उजाडियो, कयौँ आमाहरुको काख रित्तो भयो, कयौँ नानीबाबुहरु टुहुरा बने, यो सब केका लागि गरियो ?
‘प्रयोगशाला’ पढिसकेपछि यस्तो लाग्यो– यो कृतिमा नेपालका माओवादीलाई केन्द्रमा राखेर तत्कालीन राजतन्त्र र भारतीय संस्थापनसँग उनीहरुको उतारचढावपूर्ण सम्बन्ध केलाउन खोजिएको छ । यस अर्थमा ‘प्रयोगशाला’ नेपाली सङ्क्रमणमा दिल्ली, दरबार र माओवादीको भूमिकाको लेखाजोखा हो ।
सम्भवतः आधुनिक नेपालको जन्म भएयता झन्डै अढाइ सय वर्षको इतिहासमा दशक लामो माओवादी विद्रोह सबभन्दा ठूलो आन्तरिक चुनौतीका रुपमा देखा परेको थियो । त्यही चुनौतीलाई आत्मसात् गर्दै सुधीर शर्माले राजनीतिक दल र भारतीय एजेन्सीहरुको बीचको सम्बन्धलाई थप चुनौती थपिदिएको भान भएको छ मलाई ।
अक्षर–अक्षर निफनेर केलाउँदा पनि बियाँको त कुरा परै रह्यो, कनिकासमेत भेट्न कठिन ‘प्रयोगशाला’ मा प्रयोग गरिएको सरलतामा म जस्ता राजनीतिको ‘र’ सम्म नबुझेको पाठकलाई पनि सहजै आकर्षित गर्न सक्ने कलाले जोकोहीको पनि मन छुन सक्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । लेखन कार्य आफैँमा कठिन कार्य हो, उसैमाथि सत्यतथ्य घटनाहरुलाई कला र शिल्पको मालामा गाँस्नु अझ कठिन बाटो हो जस्तो लाग्छ मलाई । यस मानेमा पनि यो कठिन बाटोलाई सहजै पार गर्न सफल भएका छन्, सुधीर शर्मा । यो सफलताले शर्मालाई हरहमेसा पछ्याइरहोस् मेरो कामना, साथै कृतिको सफलताको शुभकामना पनि ।
(पश्चिम चितवन, मेघौली)